Date My Pet » Instant Checkmate ny Torolalana ho Spotting Fake Online Daters
amin'ny Logan sacrés
Last nohavaozina: Oct. 21 2020 | 3 min namaky
Indraindray ry zareo manantena fotsiny ny saina. Indraindray mpanao gazety ry zareo miezaka ny hanao teboka. Ary indraindray fotsiny izy ireo te-scam anao. Na inona na inona ny antony manosika dia, chunk manan-danja ao anaty aterineto ny mombamomba mampiaraka dia tanteraka fakes - noforonin'ny eritreritra mombamomba dupe marina natao an-tserasera daters. Ary raha tsy mitandrina ny maso avy, ianao mety ho niharam-boina manaraka.
Io fomba fanao lota, antsoina hoe toy ny catfishing, rava ny olona ny fotoana sy ny vola isan 'andro. Raha toa ny ankamaroan'ny daters aterineto ireo olona mahafinaritra, misy atody ratsy vitsivitsy avy tao. Soa ihany, scammers-tserasera mora tsy mba ho ny sharpest antsy tao amin'ny vatasarihana, ka matetika manao Fahadisoana Kely tsotra Soso-kevitra eny ny hafetsen'i. Raha te-mba ho azo antoka fa manaraka ny daty no tena fifanarahana, foana ireo toro-hevitra tsotra ao an-tsainy nandritra ny dia an-tserasera amin'ny olon-tiany.
1) Mihazakazaka A Reverse Image Search
Ny kaonty sandoka ihany koa dia midika hoe sandoka sary. Rehefa hanorina mpisoloky amin'ny Internet sandoka profil an-tserasera, Matetika izy ireo hihazona sary Ho hitany eny amin'ny Internet. Manokana, ireo izay hitany rehefa Google "mafana lehilahy" na "mafana ankizivavy." mihitsy aza izy ireo mampakatra headshots Ho avy modeling toerana mba hahatonga ny mombamomba azy toy ny mahasarika araka izay azo atao. Moa ve tsy ho voafitaka. Fomba tsotra mba hahitana raha ny sary an-tserasera dia ny dika mitovy iray dia amin'ny alalan'ny Google mifamadika nihazakazaka sary fikarohana. Raha ny mombamomba ny sary dia voalalotra manerana ny Internet, na raha toa ny sary mazava ho azy fa an'ny olon-kafa, Fantatro fa ianao efa nahazo catfisher eo amin'ny tanana.
2) Jereo Fa Terrible teny anglisy
Raha ny mombamomba azy ireo hiseho toy ny manao nahaterahany, ary lehibe tany amin'ny fanjakana, saingy ny fitsipi-pitenenana feo toy ny olona iray izay mianatra ny teny fotsiny, izay goavana saina mena. Online fiarahana scammers dia matetika ampitan-dranomasina. Dia milaza fa ry zareo toy ny Amerikana toy ny Tendrombohitra Rushmore, fa ny marina dia milaza fotsiny fa mba handray American vola. Raha ny an-tserasera tsy tapaka paramour tsipelina sy ny fitsipi-pitenenana manao fahadisoana fa tsy manidina ao amin'ny kilasy faha-3 efitrano fianarana, dia mety hoe ny avy any ivelany ry zareo scammer.
3) Ve An Online Background Check
Public rakitsoratra dia natao ho an'ny rehetra izay te-hahita azy ireo. Koa raha ny olona izay nifandray aminao amin'ny Internet teraka tany Etazonia, dia tokony hanana rakitra rakitsoratra-bahoaka. Search ny anarany, miaraka amin'ny fanjakana, ao amin'ny firaketana-bahoaka an-tserasera fikarohana. Na inona na inona raha miakatra, izany no marika fa izy ireo dia tsy ho tanteraka ianao manao ny marina miaraka aminao.
4) Mitandrema Fast mpandraharaha
Raha misy olona te-hitsambikina amin'ny aterineto ny "mahafantatra anao," ary mandehana mahitsy ho any amin'ny "Soulmates ho amin'ny fiainana" ny fifandraisana dingana, Mety tsy ho satria ry zareo mpankafy fatratra tantaram-pitiavana. Mety ho satria ry zareo mahaliana kokoa ny kitapom-batsy noho ny fonao. Koa satria scammers aterineto no antony mba hahazoana ny fitiavana araka izay haingana araka izay azo atao, Ho hifindra izy ireo faran'izay haingana. Niahiahy mafy. Raha tratra ianao tamin'ny tafio-drivotra amin'ny aterineto pitiavana, maka faharoa tokony hampihenana ny maso sy ny droa fa ny zavatra rehetra lazain'izy ireo marina.
5) Jereo raha izy ireo ihany no Want To Chat Online
Dia 100% ny fifandraisana atao amin'ny alalan'ny mailaka sy ny soratra? Ny fandavana ny miantso na mihaona mifanatrika mety milaza mihoatra noho ny tena menatra. Mety midika fa tsy te-hanome anao na inona na inona mba hisalasala ny lainga. Mangarahara no fanalahidin'ny fifandraisana tsara. Raha tsy afaka mifampiresaka aminao ampahibemaso, haka izany ho famantarana fa tsy tia anao mihitsy.
Farany, raha Efa voafitaka tamin'ny an-tserasera scammer ary efa swindled anao nivoaka avy vola, tatitra izany ho an'ny governemanta federaly Crime Internet fitarainana Center. Mety ho somary mahamenatra ny miaiky fa efa voafitaka ianao, fa tatitra dia hanampy misakana ny hafa tsy hatao scammed.